Ziziphi iingcebiso ze-SEO zakutsha zokunyuka kwi-Google phezulu?
Kukho iinguqulelo ezinkulu zeenguqu kunye nokuhlaziywa okunikezelwa yiGoogle kude kube lo nyaka. Kwaye kukho izikhulu kakhulu zeengcebiso ze-SEO ze-2017 zakutshanje ezifumaneka kwindawo evulekileyo kuyo yonke indawo kwiWebhu. Ngoko, ziziphi izixazululo ezintle kakhulu ezifanele ukhethe phakathi kweendlela ezininzi ezahlukeneyo, izikhokelo kunye neengcebiso? Khumbula, iikhompyutheni ezininzi zokuSebenza kweeNjini ezikhoyo ngoku, uncedo olungakumbi kumgangatho owufumanayo - nationwide property & appraisal services llc. Masibe nomboniso omfutshane kwaye sibone ukuba ziphi iindlela eziqhubekayo zilawulwayo, ziphi na zazo ezilahlekelwa ngumoya, kwaye ukuba kukho izinto zangaphambili ezingasebenzi, nokuba zibi nakakhulu, zinokuthi zibe ngamaqhinga okuphulwa komthetho onokuthi angabanjwa ngezohlwayo zeGoogle.
Namuhla, yonke imidiya yeendaba yoluntu ithola ngokugqithiseleyo kwiluhlu lweGoogle yamanqaku e-injini ye-injini (SERPs). Ngokutsho kophando lwakutshanje, iingcali zoshishino kwinqanaba lokuba neenjongo ezifanelekileyo kunye neendlela eziphambili zentlalo (njenge-Google +. I-YouTube, i-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn, njl. ) baya kuhlala befumana amandla abo, ubuncinane kwikamva elibonakalayo.
I-Content Content Content
Akumangalisi ukuba umxholo wevidiyo ngoku uyisisombululo esicacileyo sokubambisana koluntu olunamandla kunye nolwazi olungcono lomsebenzisi. Ingakumbi - oku kuhamba ngoku kunengqiqo kunokuba kuyenzeka ngo-2016. Ngoku, uninzi lweengcebiso ze-SEO zakutshanje zibhekiselele kwiividiyo ezikwazi ukuphucula i-page yakho jikelele. Kwaye ezinye iinani limelela ezinye iziphakamiso ezingamangalisa, njengoko ngokwemithombo yoshishino ethandwa kakhulu, umxholo wevidiyo uqikelelwa ukuhambisa ngoku ngaphezu kwe-40% yokuchithwa kwezinga lokukhula (xa kuthelekiswa nokubhala kwansuku zonke).
Umkhangeli wokuThuthukiswa kweMotorola
Nantsi enye yeengcebiso eziphambili ze-SEO. Zibuze nje ukuba iwebhusayithi yakho yezorhwebo inobungakanani obuphathekayo. Masijamelane nayo - unesiqendu esithile esiluncedo sifikelele ukuba i-Mobile-First Index izakufakwa ekusebenzisweni (i-Google imva nje iqinisekise kwakhona ukuza ngo-2018). Ngoko, ngokukhawuleza ukulungiswa kweselula kuya kutshintshela ukunyaniseka, kube yimeko eqhelekileyo yeemeko. Yingakho ixesha eliphakamileyo uphuthuma ukuba uphinde ucinge kwaye uphuhlise ubuchule bakho bokucwangcisa obuqhutywa ngokukodwa ngumgangatho ogqithiseleyo wokukhangela.
Ukhetho lwe-Voice Search
Okufana nomoya wamanje wokulungiswa kweselula, ukukhangela ngezwi kubonakala nje kulandela i-suit! Kwaye ngokukhawuleza ukhetho lwezwi kulindeleke ukuba lube ngumgaqo omtsha, kunokuba kubekho ngaphandle. Ngaphandle kwento yokuba uphando lwezwi lunegalelo elifanelekileyo ekuqhubeni ukhuseleko, ukuphuhliswa kwayo kwindlela enokuthi ikhutshwe yiziqhamo ezinkulu, ngasinye siqalise iinguqu zabo zezikhokelo zokukhangela ngezwi (e. g. "Cortana" yi-Microsoft, "i-Google Now" nge-giant search world, kwaye "Siri" yi-Apple).
I-Aggregation (Content) enkulu
Nantsi isiphakamiso sam sokugqibela. Phakathi kwezinye iingcebiso ze-SEO zakutshanje, kukho ukuqonda okulungileyo kokuhlanganiswa komxholo, okwenzeka ngoku ngakumbi kunye nokubhetele. Ndiyathetha apha ukuba ukuhlanganiswa komxholo kuyindlela efanelekileyo yokwabelana ngokubanzi kweziqulatho ezikhankanywe kwangaphambili ukusuka kumanani amaninzi wemithombo eyahlukileyo ukubhena abantu abajoliswe kulo. NgesiNgesi esicacileyo, emela ukugcina indawo yokugcina isiqulatho semimandla yamagunya aphakamileyo kwimpembelelo ephezulu kwizinga eliphezulu. Oku kungathi kubonakala kungaqhelekanga kuthi, kodwa abanye abantu abahlakaniphile eMoz naseHibspot, umzekelo, bebeqhuba iprojekthi enjalo ixesha elide (khangela kwi-Inbound. org). Ngoko, lixesha elide lokuqwalasela oku kulandela umxholo womxholo omtsha kwaye uqale ukuqokelela kunye nokuwulinganisa ukusuka kwenye imithombo yesigqeba esiphezulu esifanelekileyo kwisifundo sakho.